Momba anay - Huaian Junbao Hydraulic Machinery Co., Ltd.
Tongasoa eto Jiangsu Huaian Junbao Hydraulic Machinery Co, Ltd. Nahay manokana momba ny famatsiana ny fantsom-pandehanan-drano mikoriana, ny fantsom-pahaleman'ny hidraulika hidirana, ny fitahirizam-bolo ny fehikibo maro, ny valiben'ny tsindry amin'ny seranan-tsambo sy ny maro hafa. Azontsika atao ny mamatsy tarika P40, P80 Series, RD5200 Series, SD WAVOIL Series, DCV Series, ZD Series, CDB Series ary hafa hatrany amin'ny 30L / min hatramin'ny 400L / min, tsindry tsindry manomboka amin'ny 16Mpa ka 50MPa sy ny hafainganam-pandeha mahery vaika indrindra , vokatra dia ampiharina betsaka amin'ny fambolena, fananganana, solika, jono, fitrandrahana ary indostria hafa.
Lasa mpitarika eo amin'ny sehatra izahay. Ary foana ny fanokanana hatrany amin'ny famolavolana, fikarohana, famokarana vokatra vaovao arakaraka ny tsena sy ny fangatahan'ny mpanjifanay.Ny vokatra avy any amintsika dia efa nohondrana tany Azia Atsimo Atsinanana, Aostralia, Moyen Orient, Afrika ary Amerika Latina, sns.) Dia nahazo laza tsara koa teo amin'ity sehatra ity.
Hanohy manatsara bebe kokoa ny rafitra fitantanana orinasa izahay sy ny serivisy serivisy aorian'ny varotra, ahafahantsika manome ny mpanjifa manodidina ny asa miaraka amin'ny fantsom-pivarotan-dàlana sy fantsom-pifandraisana mety tsara, izay tohanan'ny serivisy tsara. Manao izay fara herinay foana izahay mba hahafahana mameno ny fangatahan'ny mpanjifanay rehetra.
Izahay no loharano feno momba ny vokatra kalitao sy ny serivisy mifototra amin'ny vahaolana 24 ora isan'andro.